Abwaan Weedhsame iyo Qoraa Maxamed Baashe oo Isku Khilaafay Calanka Buluuga ah ee Somaliya. - Haldoor News | Haldoor News
Abwaan Weedhsame iyo Qoraa Maxamed Baashe oo Isku Khilaafay Calanka Buluuga ah ee Somaliya.
Abwaanka oo ka Jawaabaya isla markaana wax ka Waydiinaya Qoraal uu Bartiisa Facebook-ga soo Dhigay Qoraa Maxamed Baashe Xaaji Xasan ayaa Hadalkiisa u dhigay Sida Tan.
“Maxamed Baashe Xaaji Xasan qoraalkaagii markaan akhriyey, todobadan qodob baan kuu hayaaye, bal jid u bixi.
1. Waxad tidhi “Ta calanka buluugga ah ee Soomaaliya oo qaar kala maqaam dhigeen calankii Naasigii Hitler, ha la ogaado in uu yahay calan laandheere ah oo xaraar cad butaystay”
Habka aad u tidicday hawraartaada ayaa ah: “Haddii B iyo T la is barbar dhigo, mar kasta ‘B’ ogooda, iyadaa ka wacane” balse maad raacin wax alle wax lagu kala saanyado, kolkaa hadalkaagu waa anigaa jecele ila jecloow, taasina waa caadifad ee caqli maaha.
Waxse iga su’aal ah: Inay kala wanaagsan yihiin maxaad ku salaysay? Muxuu yahay halbeegga aad ku kala saartay, ee laba calan inu mid ka wanaagsan yahay ama ka laandheeraysan yahay mid kale lagu gartaa? Ma midabkaa? ma xarqada laga sameeyey baa? Mise waa arrimo kal-yaal ah (Subjective) oo aan la qiyaasi karin?
Weliba aan kuu sii faahfaahiyo, 3 > 1 waan caddayn karaa. Sidoo kale, 2kg inay ka culus yihiin 0.5kg waan isla meel dhigi karnaa. Haddaba bal sida calan, calan kale uga wanaagsan yahay si maan-gal ah iigu qanci. Caadifada ceel ku soo rid oo caqliga aan ka wada hadalno.
2. Waxad tidhi “Calanka buluuga ahi Waa calanka ay ayidsan yihiin, jecel yihiin, kuna iimaan qabaan in ka badan 27 malyuun oo ka mid ah 30 malyuun oo lagu qiyaaso qawmiyadda Soomaalidu”
Fadlan ma ii sheegi kartaa halka aad xogtan ka keentay? Ma adigaa qaaday tiro-koobkan? Haddaad qaaday Nala wadaag habka iyo hannaanka aad u samaysay xog-ururinta, si aan kuula hubino, haddii aanad qaadin noo sheeg cidda qaaday ee aad ka soo xigatay?
Hawraartaada kor ku xusan ee ah “In ka badan 27 milyan kana yar 30 milyan ayaa calankan ayidsan” (27m < X < 30m )
Been kuguma aqoon oo waan kuu cudur daarayaa laakiin hawraartan xagga sare taal waa waxba kama jiraan. Waayo, Wadarta tirada dadka soomaalida ah ee ku kala nool wadamada Djibouti, Kenya iyo Ethiopia ee saddexdaas dal calanadooda hadhsadaa waa 9,554,094. Bal haddaba dadkan 27-ka milyan ka badan ee calankan Buluuga ah ayidsan ee ku iimaan-qabaa xaggay joogaan? Indhaha haddaad dhiig cas ka keento oo aad badda cabto keeni maysid, Waayo,
30,000,000 – 9,554,094 = 20,445,906
20,445,906 < 27,000,000.
Weliba sidaas tiradii dadka Somaliland-na way kuu hadhay!!!!
Ereyada “ayidsan” iyo “ku iimaan-qaba” labadaba xaal sii.
3. Waxad tidhi “Calanka Buluuga ahi Waddanka Djibouti waa ka laandheere. Is maamullada Soomaalida ee Itoobiya iyo Kenya waa ka laandheere.”
Dhulkaa aad sheegtay in aan la sudhi karin oo aanu ka babban karin adiguba waadigaa qirsan ee sheegaya inay yihiin dalal kale’e, ma calamadooda ayaa u laandheere ah mise kan Soomaaliya?
Haddaadse laandheerenimada uga jeedo, waa lagu dhex huwan karaa, calanka faransiis, Maraykan, Ingiriis iyo kan Sucuudigaba waa lagu dhex huwan karaaye, maxay tahay waxa uu kuwa kale dheer yahay?
Kolkaa inaguna miyeynu aqoonsanaa oo Hargeysa, Burco, Borama, Ceerigaabo iyo Laascaanoodba waan ka taagnaa?
Haddaanu calanka Buluuga ahi cidna dembi ka gelin ee wixii dhacay dad sameeyey, illayn kan NAZI-guba cidna dembi kamuu geline wixii dhacay dad baa sameeyee, maxaad isaga u liidaysaa ee uu dhimay? Maxaad u kala sarraysiinaysay ee midna ceebta u yeelay midna calal aan waxba geysan ka dhigay?
Saw arki maysid sidaad isu burinayso ee aad isaga hor timi?
6. Waxad tidhi “Magaca qawmiyaddu iyo astaamaheedu oo calanku ka mid yahay uma aanoobaan wixii anafo ahaa ee dhacay oo waa ay ka soo doogaan in kasta ha ku qaadatee”
Qawmiyad maxaad uga jeeddaa? Waa tee Qawmiyadan calanka qudhi astaanta u yahay? Haddaad Soomaalida u jeedo, calan qudha Soomaali wada lihi ma jirto adna taas waad og tahay.
Magaca “Soomaali” waa magac ka dhexeeya qawmiyad wadaagta af, diin iyo dhaqan oo ku kala nool 5 dal oo kala calano ah. Calanka buluuga ahina waa calan uu leeyahay shantaas mid ka mid ahi.
Magaca Soomaali iyo calanka buluuga ah ee soomaaliya maxaad isugu sidigtay?
Cidda calanka Buluuga ah diidaa Soomaalinimada miyey diiday oo Sinji doorsatay?”